फिफा बर्ष खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक, नेइमार आउट, अरु को-को परे ? (नामसहित) | Ratopati
फिफा बर्ष खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक, नेइमार आउट, अरु को-को परे ? (नामसहित)
एजेन्सी- विश्व फुटबल महासंघ (फिफ) ले बुधबार फिफा बर्ष पुरुष खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले बुधबार सार्वजनिक गरेको शीर्ष १० खेलाडीको सूचीमा पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी अटाए पनि ब्राजिलियन स्थान नेइमार अटाउन सकेनन् ।
फिफाले पुरुष खेलाडीको मनोनयनमा रोनाल्डो र मेस्सीसंँगै डी जोङ फ्रेनकी, म्याथिज डी लिट, इडेन हजार्ड, ह्यारी केन, साडियो माने, केलियन एम्बाप्पे, मोहमद सलाह र भर्जिल डिजिकलाई राखेको छ । गत सिजन बालेन डी’ओर विजेता लुका मोड्रिचलाई पनि यसपटक मनोनयनमा राखिएको छैन ।
यसैगरी फिफाले बर्ष प्रशिक्षक अवार्डको मनोनयनमा १० प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । मनोनयनमा म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डीआ्ला र लिभरपुलका जोर्गेन क्लोप सहित टोट्टनहामका मौरीसियो पोचेटिनो, डज्मेल बेल्माडी, डिडियर डेस्च्याम्प, मार्सेलो गल्लार्डो, रिकार्डो गारेसा, फर्नान्डो सान्तोस र टिटे परेका छन् ।
फिफाले महिला खेलाडीको मनोनयनमा मिलेना बेर्टोिलिनी, जिल एल्लिस, पिटर गेर्हाडसन, फुतोसी इकेडा, एन्टोनीया, जोई मोन्टेमुरो, फिल नेभिल, पेड्रोस, पाउल रिली र सरिना ब्ग्म्यिानलाई राखेको छ ।
फिफाले बर्ष खेलाडी र प्रशिक्षकको अवार्डका लागि फिफामा आवद्ध देशका राष्ट्रिय प्रशिक्षक, कप्तान, खेलपत्रकार र विश्वभरका समर्थकबाट मत लिने गर्दछ । मतदान जुलाई ३१ देखि अगष्ट १९ तारिखसम्म हुनेछ । फिफाले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २३ तारिख मिलानमा विशेष समारोहबीच यस अवार्ड प्रदान गर्नेछ ।